'एक शान्त ठाउँ' अन्तिम ट्रेलरले तपाईंलाई चिच्याउन हिम्मत गर्दछ - iHorror
घर हरर मनोरन्जन समाचार 'एक शान्त ठाउँ' अन्तिम ट्रेलरले तपाईंलाई चिच्याउन डराउँछ
'एक शान्त ठाउँ' अन्तिम ट्रेलरले तपाईंलाई चिच्याउन डराउँछ
by एरिक पानिको अप्रिल 2, 2018
द्वारा लिखित एरिक पानिको अप्रिल 2, 2018
अभिनेता / निर्देशक जोन Krasinki फाइनल ट्रेलर लागि एक शान्त स्थान यस हप्ता पछि फिल्म रिलीज हुनुभन्दा ठीक अघि अनलाइन मार्ग क्रेप्ट भएको छ। Krasinski हालै एक मा बोले साक्षात्कार iHorror को आफ्नै आफ्नै संग डेभिड एन ग्रोभ एक अभिभावकको रूपमा आफ्ना अनुभवहरूले उनलाई "कथामा अधिकतम सस्पेंस र तनाव ल्याउन" कसरी सहयोग पुर्‍यायो भन्ने बारेमा। हृदय रोक्ने ट्रेलरले आमाबुवा बन्नु भनेको पार्कमा हिड्नको लागि देखाउँदैन ... विशेष गरी खूनको राक्षसहरूको साथ एक पोस्ट-apocalyptic संसारमा।
ट्रेलरमा प्राणीहरूको धेरै नयाँ झलकहरू छन् पूर्ण खुलासा नगरी। हामी क्र्यान्स्कीको चरित्र र उसको छोरो ज see्गलमा एक वृद्ध मानिस भेट्टाउने देख्छौं, जसले अन्जानमै चिच्याउने निर्णय गर्दछ। एउटा प्राणी उहाँमाथि तत्कालै आउँछन्, तिनीहरू कति अविश्वसनीय छिटो र फुर्तिलो छन् भनेर देखाउँदै। फिल्ममा मौन खेल्ने महत्त्वपूर्ण भूमिकामा जोड दिदै उनीहरूलाई अगाडि बढाउने सवाल बाहिर देखिन्छ।
एक बिन्दुमा, हामी क्र्यान्स्की देख्दछौं हातले बन्दुकको साथ चलाउँदै, फार्ममा पृष्ठभूमिमा आतिशबाजी बग्यो। यिनीहरू आकस्मिक योजनाको रूपमा परिवारलाई कभर प्रदान गर्ने योजनामा ​​देखिन्छन्, र कहिले, सबै नरक छोडिन्छ। यस्तो देखिन्छ कि क्र्यान्स्कीले दर्शकहरूको लागि चीजहरू मिलाएर राख्ने विचार राख्यो, र अवधारणाको पूर्ण फाइदा लिदै।
क्रान्सिंकीले आफ्नो iHorror अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, "हरेक राम्रो कथा जुनसुकै प्रकारको भए पनि नाटक र तनाव हुन्छ।" उनी स्पष्टसँग बुझ्छन् कि यी कथाहरू बताउने तत्त्वहरू टिभी र सिनेमामा एक विश्वव्यापी भाषा हो। इतिहासमा केहि डरलाग्दा फिल्महरू, जस्तै यो चम्काउने र एक्जोरसिस्ट, निर्देशकहरूले सिर्जना गरेका थिएनन जसले विशेष रूपमा हrorरर गर्छन्। विधामा नयाँ रगत देख्न पाउँदा ठूलो छ।
एक शान्त स्थान यस शुक्रवार, अप्रिल release लाई रिलिज गर्नेछ? के तपाई पूरै इमर्सिभ अनुभव प्राप्त गर्न सिनेमाघरमा यो हेर्न जाँदै हुनुहुन्छ? हामीलाई टिप्पणीहरूमा थाहा दिनुहोस्, र तल अन्तिम ट्रेलर जाँच गर्नुहोस्!
शान्त ठाउँएक शान्त ठाउँमा अन्तिम ट्रेलरशान्त ठाउँ ट्रेलरEmily bluntअन्तिम ट्रेलरजोन क्रसिन्स्कीनयाँ ट्रेलर
जेम्स वान, र रोय ली 'The Tommyknockers' उत्पादन गर्न सेट
स्टीफन किंगको 'द स्ट्यान्ड' रिपोर्टले 10-घण्टा सीमित टिभी श्रृंखला